Ogaden News Agency (ONA) – Mudaa haraado Waa wayn oo Ka socda Gobolka Axmaarada.
Mudaa haraado Waa wayn oo Ka socda Gobolka Axmaarada.
Posted by Wariye Qaran	/ May 2, 2019
Wararka nagasoo gaadhaya Wadanka Itoobiya Gaar Ahaan Gobolka Amxarada Ayaa Sheegaya inay maanta Gobolkaas kajiraan, mudaharaado siwayn lasoo agaasimay oo lagaga soo horjeedo maamulka Gobolka Amxarada iyo siyaasada Abiye Ahmed eeku aadan Qowmiyada Amxarada.
Mudaharaadadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay Ururada Xuquuqda Amxarada udhaqdhaqaaqa sida Ururka (NAMA) waxayna sheegeen in Abiye Ahmed iyo Ururka ODP ay dagaal qaawan kula jiraan dadka Amxarada ah.
Mudaharaadada ayaa waxay hada kasocdaan Inta badan Gobolka Amxarada sida Magaalooyinka Bahardar iyo Gonder.
Dadka mudaharaadaya ayaa kuqaylin haya Erayo kadhan ah Xisbiga talada Gobolka Amxarada haya waxayna kubaaqayaan in xisbiga talada haya meesha dhaafo madaama oo uu kufashilmay inuu Danaha dadka Amxarada ah si dhab ah u matalo, kana gaabiyay inuu difaaco Amxaarada lagu layn hayo Gobolka binshagul gumuska iyo xuquuqda ay kaleeyihiin Casimada Itoobiya ee Adis Ababa oo ay sheegeen lagala wareegayo lana barakicin hayo.
Mucaaradka Amxarada ayaa ku andacoon haya In Abiye Ahmed khiyaamay oo uu Beegsan hayo Shacabka Amxarada ah iyo danahooda una shaqayn hayo Qomiyadiisa Oromada oo kali ah.
Taniyo Ituu xilka lawareegay Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed waxaa wadanka kadhacay Isbadal balaadhan oo meela badan taabtay Waxyaabaha ugu waa wayna waxaa kamid ahaa sidayntii Maxaabiistii siyaasadeed la heshiintii Dowlada Eritrea, Ururadii Gobanimo doonka ahaa Iyo mucaaradkii Dibad jooga aha.
Balse dhanka kale waxaa wadanka ka dhacay dagaalo Qomiyadod oo ay boqolaal Ruux ku dhinteen, kuna barakaceen malaayiin shacab ah waxayna Itoobiya noqotay wadanka dunida ugu barakacaayasha badan iyadoo ka kor martay wadamada Suuriya iyo Yeman, taasoo walaac iyo shaki ku abuurtay dadka Itoobiyaanka ah su’aal na galisay Kartida Abiye Ahmed uleeyahay inuu wadanka sidhab ah udajiyo gacantana kusoo celiyo Kala danbayntii iyo isdhaxgalkii Qomiyadaha kala duwan ee Itoobiya kuhoos nool.